Back Burner တွင်အီးမေးလ်မထည့်ပါနှင့်။ | Martech Zone
Back Burner တွင်အီးမေးလ်မထည့်ပါနှင့်။
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 18, 2011 Lavon ဘုရားကျောင်း
နောက်ဆုံး၌ Delivra post ည့်သည် post ကို Martech အတွက်၊ နေးလ်သည်သင်၏အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်များနှင့်သင်ကြုံတွေ့ရသောအဓိကအတားအဆီးအချို့ကိုသင်အားမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် အချိန်မရ လိုချင်သောအရာကိုပြီးမြောက်ရန်။ ငါအချိန်များအတွက်ဖိခံရနားလည်သဘောပေါက်; တစ်နေ့တာအတွက်လုံလောက်သောနာရီရှိပုံရသည်ဘယ်တော့မှ!
သို့သော်ထိုသို့ပြောကြားခြင်းသည်သင်၏အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်ကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည် ဦးစားပေး။ အကယ်၍ သင်သည်အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုမစတင်ပါက၎င်းသည်စတင်ရန်အချိန်အတန်ကြာပြီဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းဝမ်းနည်းဖွယ်မကောင်းမှုကိုလျစ်လျူရှုခဲ့လျှင်မည်သည့်နေရာများကိုချက်ချင်းအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်အချိန်ယူရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ သင်၏အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်ကိုမထည့်ပါနှင့် နောက်ကျော burner!
အသစ်က Create နှင့်အကြောင်းအရာတိုးတက်လာသည်
Update ကို သင့်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်ရန်အားပေးသည့်ကော်ပီဖြစ်သည်
သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုအာရုံစိုက်ရန်အချိန်ယူခြင်းသည်ပိုကြီးသောပရိသတ်သို့ရောက်ရှိခြင်း၊ သင်၏လက်ရှိပရိသတ်ကိုပြန်လည်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်ပိုမိုကြီးမားသော ROI ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင်ကွာခြားနိုင်သည်။ နှစ်သစ်ကူးလာပါကသင်၏အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်အစီအစဉ်ကိုနောက်ကျော burner မှဖယ်ရှားပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
Tags: မြစ်ကြီးနားdelivra အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှစ်သစ်နည်းဗျူဟာကိုအီးမေးလ်ပို့အီးမေးလ်နည်းဗျူဟာများ
n လည်ပတ်မှုနှုန်း ၉.၆% ဖြင့်တိုးလာသည်။
အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှု၏ Pew သုတေသန
18:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 1, 06
Fantastic post, @lavon_temple: disqus! ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပြောနိုင်သည်မှာအီးမေးလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပြီး Marketing Technology Blog တွင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သက်ရောက်မှုကိုသိခဲ့လျှင်လွန်ခဲ့သောနှစ်များက ပို၍ ကြီးမားသော ဦး စားပေးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။